FAALLO:- Nabadda adiga ayaa ku nool ee iyadu kuguma noola
March 31, 2015 - Written by Puntland Fox
Amnigu waa shayga ugu horeeya ee looga baahanyahay bulsho kasta oo meel wada degani inay iska kaashadaan siday wax uga qaban lahaayeen maxaayeelay waxaa ku xidhan jiritaankooda nololina kama suuroobi karto meel aan amni iyo kala dambayni kajirin.
Deegaanada Puntland waxay kamid yihiin deegaanada ugu nabadda iyo xasiloonida badan guud ahaan dalka soomaaliya waana deegaan ay nabadiisa iyo xasiloonidiisa iska kaashadaan oo gacmohooda kaga sheqeeyaan Dawladda Puntland iyo shacabkeeda oo ku wada shaqaynaya kalsooni iyo daacadnimo ka dhexaysa madaxda sare ee puntland iyo shacabkooda.
Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa “Carrab iyo Ilkaa isugu dhow iyaguna waa is qaniinaan iyagoon cadaawadi kadhexayn” taasoo micneheedu yahay mar haddii bulsho ay meel wada deggantahay is qabad iyo is faham la’aani waa imaanaysaa hase ahaatee deegaanada Puntland ayaa waxay caan ku yihiin dhaqan soo jireen ah oo aad u fac-weyn kuwaas oo iyagu lafdhabar u ah isu soo dhoweynta iyo isu soo dumidda walaalaha mad-madowgu soo kala dhexgalo ilaa ay ka gaadhaan guul, heshiis iyo xasilooni waarta.
Aminga ka jira Puntland waa bud-dhigaha iyo aasaasaha lagu yagleelay dawladnimada iyo caddaaladda aynu ilaa iyo imminka ku naaloonayno iyadoo soomaaliya intee badan ay kajiraan dhibaatooyin isugu jira colaado, Maamul la’aan , argagixiso iyo isqab-qabsi beeleed oo ku salaysan fara gelin siyaasadeed oo dibadda ah.
Geesta kale markii ay meesha ka baxday dawladdii dhexe ee soomaaliya dalkiina uu wajahay jaahwareer siyaasadeed iyo colaado aan cidna loo meeldeyeyn Puntland waa meesha keliya ee ay ummadda soomaaliyeed usoo doonteen nabad gelyada iyo nolosha waxaanay ka heleen ammaan , wax barasho iyo ganacsi ama dhaqaale waxaana sabab u ah arrimahaas oo dhan ammaanka iyo xasiloonida kajirta deegaanada Puntland.
Muwaadin Nabadda adiga ayaa kuneel eh iyadu kuguma noola haddii aynaan ammaankaa isaga ah aynaan iska kaashaan meelna aynaan ugasoo wada jeesan waxaa dhici doonta in aan ku noqono wixii dhacay 1991-dii isla markaasina waxaa uu khatar u noqonayaa waddankeenu inuu dib ugu laabto taariikhdii madoobayd eh Gumaysiga.
Dadka reer Puntland waa dad xadaarad iyo ilbaxnimo facweyn u saaxiib ah waana dad ku dhamaysta dhammaan wixii khilaafaad iyo isfaham la’aan ah isku tashi iyo isu tanaasul ku salaysan walaalnimo waana sababta ay kusoo caana maaleen maanta iyo maalintii uu meesha ka baxay qarankii soomaaliyeed.
Haddaba waxaan kula talinayaa dhammaan muwaadiniin reer Puntland meel kastoo ay joogaan inay ilaashadaan adkaystaana ammaanka iyo xasiloonida kajirta deegaankooda iyagoo kaashanaya dawladdooda ku shaqaynaysa siyaasadda kusalaysan horumarinta iyo midnimada shacabka iyo adkaynta ammaanka ayna meel uga soo wada jeestaan kuwa qaswadayaasha iyo sharwadayaasha inaku dhexjira hadduu yahay mid ku shaqaynaya maskax shisheeye iyo haduu yahay mid ku shaqayna falalka arxan laawayaasha khawaaarij nabad diidka ah ee alshabaab.